Adigaaga aan iswiidhishka ku hadlin waxaad xaq u yeelan kartaa in laguugu luqaddaada turjumo si aad macluumaad u heshid, una qabsatid ballan tallaal. Marka lagu soo waco si ballan tallaal laguugu qabto, sheeg in aad turjumaan u baahantihid. Sheeg xitaa luqadda ay khuseyso.
Fadlan kaasho qof xigto ah haddii aadan af-Iswiidhish ama af-Ingriis ku codsan karin turjumaan. Waxaa dabadeed lagu soo wacayaa marka turjumaan la ballamiyo.
Naftirkaagu ballan waad ku qabsan kartaa af-Iswiidhish adigoo ku gelaya aqoonsiga elekteroonigga ah. Waxaad xitaa taleefanka: 010-452 63 03 ballan kula qabsan kartaa af-Iswiidhish, af-Ingriis iyo af-Finish. Fadlan kaasho qof xigto ah si aad ballantaada u qabsatid.